Faallooyinka qasabadda Delta Shower
Bogga ugu weyn / blog / Faallooyinka tubbada Delta Shower: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee Delta Delta Bulukeetooyinka
2021 / 02 / 04 Qoondayntablog Tilmaamaha qasabada 745 0
Si kasta oo mashquul, walaac, ama qasan ee maalintaadu tahay, waxaad had iyo jeer isku hallayn kartaa qubeys weyn si aad u nasato una nasato. Dabcan, nidaamka tubbada qubeyskaaga ayaa door ka ciyaaraya sida loo qaboojiyo qubeyskaada.
Waxyaabaha tayada sare leh ee Delta waxay ka sii fidsan yihiin qasabadaha qubeyska iyo nidaamyada qubeyska oo buuxa, oo ka bilaabma xulashooyinka miisaaniyadda u habboon ilaa raaxada dhabta ah. Hubi xulashadeena ugu sareysa nidaamyada tubbada qubeyska Delta.
1. In2ition Afar-Dejin Laba-Hal-Meel Maydhasho
Si aad u hesho qubeys weyn, mararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad ka gudubto madaxa aasaasiga ah ee xagasha hal-xagasha ah oo aad u gaartid kala duwanaansho. Taasi waa magaca ciyaarta oo leh In2ition Afar-Dejinta Laba-Hal-Meel Maydhasho Chrome 75486C .
Lifaaqa buufin gacmo-gacmeedka
Afar qaab buufin
Taabasho-Nadiifi godadka buufin
Nidaamka qubeyska ee 'In2ition' ayaa dhaliyay meesha ugu sareysa liiskayaga maxaa yeelay iyadoo ay ka buuxaan astaamo, sidoo kale waa nidaamka qubeyska ugu raqiisan liiskayaga. Waa qiimaha ugu wanaagsan ee musqusha kasta.
Nidaamka qubeyskaani wuxuu leeyahay qaab gaar ah. Waxay leedahay haad biyo-gacmeed gacmeed lagu kala bixi karo, laakiin usha ayaa fadhisa bartamaha qubayska jirka oo buuxa. Tani waxay ku siineysaa afar nooc oo buufin ah oo aad kala dooran karto: buufinta jirka oo buuxa, buufinta duugista, hakad, iyo labadaba buufinta jirka oo buuxa iyo ku buufinta isku mar.
2. Windemere Qalabka Wax-qubeyska ee Wax-qabad Kaliya
Nidaamkaaga qubeyska ayaa ka dhigaya qubeyskaaga mid raaxo leh oo qabow. Waa maxay sababta aysan u noqon karin muuqaal qurxinta sidoo kale? Taasi waa habka fikirka ka dambeeya Windemere Qalabka Wax-Qubeyska ee Wax-qabad Kaliya Chrome BT14296 iyo muuqaalkiisa cajiibka ah.
La Soco Cadaadiska Isku-dheellitirka Cadaadiska
Fursadaha xirmooyinka badan
Nidaamka xirmada qubeyska Windemere ayaa ah mid ka mid ah astaamaha soo jiidashada badan ee nidaamkan uu bixinayo. Si loo hubiyo tayada Delta ee la aaminay, nidaamkan qubeyska waxaa ka mid ah dhowr teknoolojiyad lahaansho sida MultiChoice Universal Valve iyo Daboolka Cadaadiska-Isku-dheellitirka Qalabka Cadaadiska.
Astaamaha muhiimka ah ee xirmadaan waa H2Teknolojiyada Okinetic. Tani waa mid ka mid ah hal-abuurnimada Delta, oo loogu talagalay inay ka dhigto inay dareento sida qubayskaagu u keenayo biyo badan halka nidaamku dhab ahaantii ilaaliyo biyaha.
Windemere ma niyad jabto markay timaado u-habeynta, sidoo kale. Waxaad ka iibsan kartaa xirmooyinka qubeyska ama qubeyska iyo tubbada qubeyska. Waxa kale oo ay ku timaaddaa saddex ikhtiyaar oo dhammayn ah waxaadna ku iibsan kartaa ama aanad lahayn qallafsan.
3. Lahara 14-Taxane Meel Kali-Gacan-qabe ah iyo Qalabka Tubbada
Haddii aad ka mid tahay milkiilayaasha guryaha aan tiradooda la hayn ee leh qasabadaha Lahara ee musqusha musqusha, maxaa ka fiican oo lagu buuxiyaa tubooyinkaas marka loo eego nidaamka qubeyska ee u dhigma? Delta wuu ogyahay farxada musqusha si fiican la isugu duubay waxayna ka dhigayaan mid fudud Lahara 14-Taxane Meel Kali-Gacan-qabad ah iyo Qalabka Tubbada Naxaas T14438-CZ .
Loo habeeyay tubbada qubeyska iyo qubeyska
Shan goobo buufin ah
Nidaamkan qubeyska ayaan niyad jabin taageerayaasha alaabooyinka kale ee Delta ee Lahara. Dusha sare ee muuqaalka caadiga ah, nidaamkani wuxuu leeyahay gaar ahaan noocyo kala duwan oo xulashono buufin ah. Waxay ka mid yihiin buufinta jirkaaga oo buuxa, mashiinka lagu buufiyo, mashiinka lagu buufiyo jirka oo buuxa, buufin jilicsan oo jilicsan, iyo shaqo hakin.
Buufiska jilicsan ee jilicsan waa muuqaal gaar ahaan naadir ah. Waa buufin jilicsan oo ceeryaamo u eg oo ku habboon markaad rabto nal, biyo raaci qabow.
4. Lahara 14-Taxane Qasabadaha Qoob-ka-shaqeeya oo Keli ah
Marabtaa muuqaalka Lahara iyo astaamaha cajiibka ah laakiin tubbo ha ku haysan qubayskaaga? Waxaad nasiib u leedahay Lahara 14-Taxane Qasabadaha Maydhada Keliya Naxaas T14238-CZ .
Nidaamkan qubeyska Lahara wuxuu leeyahay dhammaan astaamaha iyo faa iidooyinka sida xirmada qubayska iyo tuubbada, oo ay ku jiraan habka nasashada ee jilicsan ee jilicsan. Farqiga ugu muhiimsan ayaa ah in nidaamkan uusan ku jirin tubbada tubbada. Natiijo ahaan, waa wax yar ka dhaqaale badan, sidoo kale.
Labada nidaam ee qubayska Lahara 14-Series labadaba, waxaa muhiim ah in la ogaado in xirmooyinka aysan ku jirin waalka, markaa hubi inaad iibsato waalka aad u baahan tahay ka hor intaadan bilaabin rakibaadda.
5. Saddex-taxane 17-Taxane Xidhmada Wax-qabad ee Maydhashada
Ka fikir Trinsic sida naqshadeynta Delta ee si gaar ah loogu sameeyay milkiilayaasha guryaha leh cilad casri ah. Sida qasabada musqusha ee 'Trinsic', ayaa Trinsic 17-Taxanaha Xidhmada Waxqabadka Labada-Dhinac ah Champagne Naxaas T17259-CZ wuxuu leeyahay dhammaan qaabka goynta-jeexan ee aad rabto.
Trinsic waa mid ka mid ah moodooyinka Delta-dhamaadka sare, xirmada qubeyskoodana ma aha mid ka reeban. Waa nooca ugu qaalisan liiskayaga, laakiin sabab wanaagsan.
Nidaamka qubeyska ee 'Trinsic shower' wuxuu adeegsadaa Delta's H oo horumarsan2Teknolojiyada Okinetic, oo adeegsata qabanqaabada mowjadaha gaarka ah iyo cabbirka dhibcaha si ay u dareento inaad heshay biyo ka badan intaad runta tahay.
Muuqaal kale oo si sahlan loo adeegsado ayaa ah Monitor Pressure-Balanced Valve: mid ka mid ah hal-abuurnimada Delta. Waalka wuxuu hayaa cadaadis joogto ah oo ku saabsan xakameynta heerkulka si aadan u helin baraarujinta aan fiicnayn ee isbeddelka heerkulka degdegga ah.
Doorashada Nidaamka Delta Shower-kaaga
Qof kastaa wuxuu leeyahay fikrado u gaar ah waxa sameeya qubeyska weyn, Delta-na way aqoonsan tahay tan. Taasi waa sababta ay u haystaan ​​ikhtiyaarro badan oo loogu talagalay goobaha buufinta iyo qaabeynta nidaamka qubeyska si aad u dooran karto midka ugu habboon baahiyahaaga. Dhammaan xulashooyinka ku jira liistadani waa kuwa u qalma inay guuleystaan.
TagFaallooyinka qasabadda Delta Showertubada qubeyska	Hore:: Faallooyinka qasabadda Delta jikada: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta jikada Next: Abuur Meel Musqusha Oo Caafimaad Leh, Imisaad Ka Ogtahay?
2021 / 06 / 08 430
2021 / 05 / 13 1062
2021 / 05 / 09 781
2021 / 05 / 08 670
2021 / 04 / 22 882